မောင်ရင်ငတေ ● ကျောက်ဖရား သောင်ရင်းမှသည် မယ့်ခေါင်ဆီသို့ – အပိုင်း (၆) | MoeMaKa Burmese News & Media
စာစု (၇) စာစု (၈) .. .. . . . (၉) . . . .. (၁၀) . . . ………
Fang သို့မဟုတ် “Wiang Fang” နယ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဖန်းမြို့ဆိုတာထက် Amphoe Fang ဖန်းမြို့နယ် ဖန်းခရိုင် ဆိုတာက ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တခေတ်တခါကတော့ Mueang Fang ဆိုပြီး ဖန်းစော်ဘွားတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေသတခုပါ။ အဲဒီ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့ ထိုင်းစကား Mueang ဆိုတာက ရှမ်းလို Möng ပါ။ ကိုရွှေဗမာတွေရဲ့ အသံထွက် စာနဲ့ရေးကြတာကတော့ မိုင်း ပေါ့။
ကျောက်ဖရား သောင်ရင်းမှသည် မယ့်ခေါင်ဆီသို့ စာစု – အပိုင်း (၆) (ပိုင်-ချင်းမိုင်လမ်းဆုံမှသည် ဖန်း) စာစုကို ဒီနေရာမှာ ရပ်နားပါမယ်။